Kungani inja yami izikhulula ekhaya? | Izinja Umhlaba
U-Antonio Carretero | | Ukuziqeqesha, Imidlwane, Izinja ezijwayelekile
"Imali ingakuthengela inja enhle kakhulu, kodwa ngeke ikuthengele ukuthi uhlukumeze umsila wayo."
UHenry Wheeler Shaw, Usomahlaya waseMelika.
Enye yezinkinga ezijwayelekile iningi labanikazi bezinja abeza kimi nazo, wukuthi isilwane siyachama futhi sizithele ngaphakathi endlini. Ngaphezu kwalokho, ama-80% wamakhasimende ami avame ukungibuza lolo hlobo lombuzo kuseshini yokuqala. Futhi yilapho umsebenzi nabo uqala khona.
Namuhla sizobona ukuthi yimaphi amaphutha amakhulu abantu abavame ukuwenza lapho bezama ukufundisa izinja zethu into ebaluleke kangaka. Ngaphandle kokuqhubeka, ngikushiya nomnyango “Kungani inja yami izikhulula ekhaya?”. Ngiyethemba uyayithanda.
Abanikazi bezilwane ezifuywayo bavame ukubheka okuthile okubaluleke kakhulu ukuthi isilwane sabo sihloniphe ingaphakathi lekhaya labo, ikhaya labo, futhi singashiyi konke okugcwele umchamo nokufakwa, inkinga evame ukuba yisizathu esihle sokuhlukaniswa nomngane wethu omkhulu, Njengoba kuyizinketho eziyinhloko umnikazi ezingeni lomsebenzisi aliphatha, emthethisa futhi emthethisa, lokhu kwenza isimo sibe sibi nakakhulu, futhi kubangele ukuthi isibopho esingokomzwelo nomngane wethu omkhulu sehliswe yibo bobabili abathintekayo, okusibangela iqiniso lokuthi isilwane siyasikhulula yena uqobo ngemizwa engemihle yokukhungatheka nentukuthelo, okuthi uma singazi ukuthi singayisingatha kanjani sizogcina sesivula inja, ezoguqulela kumzwelo olimaza ukufunda njengokwesaba, nokuyinto okufanele siqinisekise ukuthi inja evela kumdlwane ayikaze izame. Emnyango, Ukufundisa ngezinga elingokomzwelo: Ingcindezi esiyibangelwa ngabantu, uzothola eminye imininingwane ngalesi sihloko. Ake siqhubeke futhi siqale ngokubalulekile.
1 Ukwehluleka okuvame kakhulu
1.1 Bekufanele ube ngumuntu ...
1.2 Indlela yesikole engcolise futhi engaphumeleli kangako
1.3 Umdlwane ingane
1.4 Ngabe sicela kakhulu? Yebo, kuningi…
2 Kungani uchamela ngaphakathi hhayi emgwaqeni?
2.1 Izindlela ezahlukahlukene zokwehluleka
2.2 Ukufunda ukwenza noma yini
2.3 Ake sengeze ukucindezeleka ku-equation
2.4 Ukungabi nabulungisa kwabantu
2.5 Umdlwane wami ufana ncamashi nomntwana
3 Kodwa yini engingayenza u-Antonio?
3.1 Awekho amakhambi asekhaya
3.2 Ukukhuluma ngokuthi ungayilungisa kanjani
Ukwehluleka okuvame kakhulu
Bekufanele ube ngumuntu ...
Isikhathi esiningi, abantu baba ngabanikazi benja (noma inja umnikazi wethu, ezikhathini eziningi ngeke wazi ukuthi ulayini ukuphi. Kubiza ...) ngaphandle kokuqala sizazise kancane ngokuthi ingqondo yalowo ohamba kanjani ukuba ngumngani wethu omkhulu (futhi okumele sibe umngani omkhulu kubo) noma ukuthi singamphatha futhi simfundise kanjani njengomdlwane, into eyisisekelo uma sifuna ajabule.
Ubuntwana benja bubaluleke njengobengane yomuntu, isikhathi sokukhula kwayo esisuka ezinyangeni ezi-3 kuye kweziyi-6 sibaluleke kakhulu. Leyo nkathi izolingana kubantu abaningi (ngokuhluka okwaziwayo phakathi kwezinhlanga nosayizi) kuya esikhathini sokukhula esisuka eminyakeni emi-4 kuye kwayi-12 yengane yomuntu.
Isiko elidumile maqondana nenja, lisenza sifune ukuyifundisa ngendlela efanayo naleyo esiye safundiswa ngayo ezimweni eziningi, ngokuthukwa nangokujeziswa ngamazwi nangokomzimba, okungafinyeleli kumiphumela emihle kubantu, Yebo, bekungeke ezihlukile ezilwaneni, futhi ngaphezu kwanoma yini lapho zingaqondi izinto ezifana nathi.
Indlela yokucindezela indlela yokuziphatha noma yokuziphatha ngodlame ingaholela kuphela ekukhuliseni isimilo, okuthi ezimweni eziningi kuholele ezinkingeni eziningi zenja yethu, okuholela ezinkingeni eziningi kithina.
Indlela yesikole engcolise futhi engaphumeleli kangako
Isikhathi esiningi ngibuza iklayenti ukuthi lizame kanjani ukufundisa inja yalo ukuzikhulula emgwaqweni, Ungitshela ukuthi usebenzisa indlela yakudala nengalungile yokuhlikihla isifonyo sesilwane emchameni noma esihlalweni, asinambithe ngenkathi sikhala, futhi njengomphetho wokugcina, mhlukanise ngokumshiya evaleleke ekamelweni noma ukumkhiphela ngaphandle kuvulandi noma kuvulandi. Futhi imvamisa lowo muntu lapho engitshela, akalindeli ukuthi ngimtshele ukuthi iphutha yilokho kanye nokuthi isibopho sodaba (okungesilo iphutha lakhe) esakhe ngokuphelele. Baningi abaze bangiphike. Nginikela le ndatshana kubo.
Le ndlela ayisebenzi nje kuphela ku-1000% (ungalenzi iphutha, bengifuna ukubhala inkulungwane) kepha futhi kubi, ngiyaxolisa, bengisho i-GUARRADA, futhi lokho ngaphezu kwakho konke kuyisibonakaliso sokuthi asilutho kangakanani uma kuziwa ekufundiseni omunye umuntu ophilayo. Uma inketho yethu yokuqala lapho sifundisa into ebaluleke njengokuthi inja ayichami noma ichithe ngaphakathi kwendlu yethu, ikhaya esihlanganyela naye, iyinkulisa enjalo, kufanele sicabange kabusha ngaso leso sikhathi uma sinakho okudingekayo ekuqondiseni impilo yesidalwa esincike kakhulu kumhlahlandlela waso ongumuntu (okuyindlela engithanda ukuyiveza ngayo) ngayo yonke into kusukela ekudleni kuya ekuphumuleni ukuze ngizijabulise.
Umdlwane ufana ncamashi nengane. Akakwazi futhi akufanele ame ukuzikhulula usuku lonke. Akunakwenzeka ngokomzimba, futhi ngenxa yezizathu ezifanayo nengane. Umzimba wakhe awukapheli futhi izicubu zakhe ziyakha. Njengoba nje ungadingi ukuthi ingane eneminyaka emithathu ibambe usuku lonke ngaphandle kokuchama, awukwazi futhi akufanele udinge injana enezinyanga ezi-3 noma ezi-3 ubudala.
Kufanele ungene ngaphakathi kusukela lapho sinakekela isilwane, ukuthi umdlwane ophakathi kwezinyanga ezimbili nezingu-2 ubudala kufanele uchame okungenani kanye njalo emizuzwini engama-6. Uma ungeke ukwazi ukuphatha lokhu, kungcono ungabi nayo inja. Noma okungenani ungakhethi umdlwane njengomngane wakho. Lapho usebenzisa inja eneminyaka emi-4 noma emi-5 ubudala, umuntu ngokuvamile akahlangabezani nalezi zinkinga. Kungakho inketho yokwamukela kufanele ibhekwe njalo.
Ngabe sicela kakhulu? Yebo, kuningi…
Futhi ukuthi umuntu ongazange aqeqeshwe noma anikezwe ulwazi, onolwazi kuphela ngendaba eyinkimbinkimbi futhi ebanzi njengemfundo ye-canine, akanalo ulwazi lokuthi yini ayifunayo esilwaneni, lapho elinde ukuthi abambe ngaphandle kokuzikhulula amahora kusukela ngisemncane kakhulu.
Imvamisa asizindli ukuthi inja ukuphela kwesilwane okufanele sishiye ikhaya lethu, ikhaya okungelakhe futhi, ukwenza izidingo zalo eziyisisekelo zomzimba.
Izinyoni, izinhlanzi, amakati, izingulube ze-Guinea, futhi ekugcineni noma yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene esinazo njengezilwane ezifuywayo, zinendawo ngaphakathi endlini yokuzikhulula, ngenkathi Sifuna inja ukuthi ilinde futhi ikwenze lapho sifuna khona (Kufushane kakhulu), futhi sikwenza kusukela ebuntwaneni bakhe bokuqala. Akubonakali kulungile kimi. Iqiniso.
Uma sithanda inja yethu kakhulu, kumele sizame ukwenza impilo yakho ibe lula ngangokunokwenzeka, kanye nokuthi zonke izidingo zakho zimbozwe futhi zivumelaniswe ngokuphelele nomphakathi wethu. Lokho wuthando, ukungachithi usuku lonke simanga futhi simgona bese simshaya futhi simhlukumeza lapho ezikhululela ekhaya ngaphandle kokuchaza ukuthi yini ebesiyifuna ngendlela ayiqondayo. Lokho kuyinto ebalulekile, nokungakholelwa ukuthi sisithanda kakhulu isilwane sethu ngoba siyamvumela angene kusofa.
Kungani uchamela ngaphakathi hhayi emgwaqeni?
Izindlela ezahlukahlukene zokwehluleka
Kulula ukubuza lo mbuzo, kepha akulula ukuwuphendula, futhi isixazululo naso asilula. Kumele kuqondwe kusukela mzuzu wokuqala ukuthi umdlwane ongafundiswanga kahle, kungenzeka ukuthi uqhubeke uchama ekhaya. Futhi yileso sizathu sokuthi izikhathi eziningi, leso silwane sigcina emgwaqweni. Noma okubi kakhulu, ku-seedy Zoo-Sanitary, i-pun ehloselwe.
Lapho sengikushilo futhi sakuqonda lokhu, ake sibheke ukuthi izinja zifunda kanjani emidlwane, bese kuba namanye amacala asebenzayo engiwabonile.
Ukufunda ukwenza noma yini
Izinja zifunda ngendlela eyisisekelo, Futhi ukufunda kwabo kusekelwe njengokwethu, endaweni ethinta imizwa, kuqhakambisa noma yikuphi okuhlangenwe nakho okusha njengoku "mnandi" noma "okungathandeki" nokuhlobanisa imizwa nakho.
Lapho umphumela wokuhlola "ungathandeki" kubo, imvamisa bahlanganisa izinhlobo ezi-3 zemizwa eyisisekelo njengokwesaba, intukuthelo noma ukukhungatheka. Le mizwa ivame ukuholela ekusebenzeni kwezindlela zabo zokucindezeleka, ukwenza kusebenze uhlelo lwakhe lwezinzwa oluzwelayo, oluzokwenza umngane wethu omncane asebenzise izidingo zakhe futhi akhulise noma yikuphi ukuziphatha, okungekho mpilo enhle njengoba noma ngubani engacabanga.
Kungakho-ke kumele sikuqonde ukuthi ukugcoba ubuso bomdlwane onezinyanga ezine ubudala ngomchamo, ukumshaya bese umjezisa, uzoyazisa njengento engemnandi neze futhi ngenxa yalokho, kude nokuba nenja efundile, sizoba nenja eqala ukubhekana nengcindezi kusukela isencane kakhulu nokuthi siyikho okugxilwe kukho. Lokhu akuphilile kakhulu ngokuya ngesibopho esingokomzwelo phakathi komnikazi nenja, futhi ayinayo i-didactic value. Kubi futhi kufanele sikuqede.
Asinakulokotha sifundise inja ngokusho kuphela lokho esingathandi ukuthi ikwenze, futhi kuncane ngokuyicindezela ngokomzimba ngokwenza izidingo zayo zemvelo noma imvelo. Sizokwazi ukukukhathaza kuphela futhi sigcine sakha inkinga enkulu kakhulu.
Inkinga ngokuthembela ekujezisweni ngokomzimba ngemfundo ukuthi empeleni ukuphela kwento okugcina kufundiswe umfundi ukuxazulula izingxabano ngodlame. Futhi lokho akulungele izingane noma izinja.
Lesi yisinyathelo sokuqala okufanele siguqulwe uma sifuna ukwazi ukufundisa inja yethu ukuzikhulula emgwaqweni. Akukona ukujezisa uma ukukwenza, njengokuvuza uma ungakwenzi.
Ake sengeze ukucindezeleka ku-equation
Kufanele uqonde ukuthi yini inqubo izinja eziningi eziyenzayo lapho zingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zazo, ngokuba kukodwa nje kuyisizathu sokuthi kungani zingayeki ukuchamela ekhaya.
Imvamisa, umdlwane omncane ohlukaniswe nonina usuvele ubhekene nengcindezi. Lokhu kucindezeleka kuvame ukuhlukumeza futhi izikhathi eziningi abantu abanalo uzwela njengoba isimo sifuna, futhi singenza amaphutha amakhulu, njengokuzama ukufundisa ngokujezisa nangokuhlambalaza, okuholela ekutheni simubeke esimweni lapho engakwazi ukuphatha kahle khona, okuzoba ngumthombo oqinisekile wengcindezi.
Uma inja icindezelekile, ichama kakhulu, Njengoba ngomchamo ususa ingxenye yokwedlula kwamahomoni okucindezeleka asemzimbeni wakho ngesikhathi sokuxineka. Uma uchama kakhulu, udinga amanzi amaningi, futhi lapho uphuza kakhulu, yilapho uchama kakhulu. Lokhu kwenzelwa okudingekayo ukuze ukwazi ukulinganisela futhi ukwazi ukungena endaweni yokuphumula kahle.
Uma, ngaphezu kwezinqubo zokucindezeleka abhekene nazo, sengeza ukucindezeleka okwengeziwe, simthethisa, simthethisa futhi simhlukanise neqembu, ngaphandle kwakhe azi ngempela ukuthi kungani, sizokwazi kuphela ukufaka uphethiloli omningi emlilweni, noma uketshezi oluningi esinyeni sakhe, njengoba ufuna ukusibuka.
Kunabantu abaningi ukuthi abakwenzayo kuvimbela ukufinyelela kwabo emanzini okuphuza noma ukuwasusa ngqo. Iphutha elingathi sína. Lokhu kuzokwandisa inkinga, ngoba ukungabi nokufinyelela okuhlala njalo kuzinsizakusebenza ezidingekile kubo njengamanzi ezandleni zabo kuzodala ukucindezeleka okukhulu, ngakho-ke bazodinga amanzi amaningi ukuze bakwazi ukuqeda ama-hormone okuxineka ngokweqile egazini labo, futhi ukungabi nawo lawo manzi, kuzokhuphula ukucindezeleka ngokwengeziwe, ngaleyo ndlela baqala iluphu lapho kungeke kwenzeke kubo ukuthi baphume bodwa futhi lapho umzimba wakho we-biochemistry unokuningi ukusho.
Ukungabi nabulungisa kwabantu
Ngaphandle kwakho konke okushiwo, akulungile kakhulu ukukutshela kuphela uma ukwenze kabi hhayi uma ukukwenza kahle. Futhi kuyinto yomuntu kakhulu.
Noma ngubani onenja, futhi uyashesha futhi unamandla okuyithethisa ngokumshaya, kufanele kube njalo nakakhulu ukuvuza inja yakhe lapho enza okuthile avumelana nakho futhi kuyamjabulisa.
Ukukholelwa ukuthi isilwane kufanele sikuthathe kalula ukuthi siyinkosi yaso nokuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sifune ukusithokozisa, ukuhlupheka ngesifiso sobukhulu esiseduze nokuba yisocialopath enezakhiwo zikaMesiya, kunokuba sibe umngani omkhulu nomngane wesilwane othembekile njengezinja.
Umdlwane wami ufana ncamashi nomntwana
Ungayithethisa ingane yomuntu eneminyaka emibili ubudala ngokuzichamela? Ungabona kujwayelekile ukuthi omunye umuntu akwenze? Ngokuqinisekile akunjalo. Kuyinto ejwayelekile futhi ingumuntu ukuthi ingane yethu izichamele, ngoba ingena kokungokwemvelo esigabeni sokukhula kwayo ngokushesha nje lapho izalwa. I-anatomy yakhe ayikakhuli ngokuphelele, futhi isinye sakhe kanye ne-sphincter akukwazi ukubamba. Kufanele uphume njalo. Kuyinto engokwemvelo njengoba ngishilo ngaphambili. Yebo, kumdlwane kufana ncamashi.
Akukona nje kuphela ukuthi ukumthethisa akusizi ngalutho ngoba umane nje akazi ukuthi lokhu akulungile noma ukuthi awufuni akwenze lokho, futhi ukukusho kuye ngodlame ngeke kumenze athole ngokushesha noma ngokushesha, kuzomenza nje ukulayishwa kwengcindezi futhi lokho kuzobenza baphephe ngokwengeziwe, lapho besingatha imizwa ebhubhisayo efana nentukuthelo, ukukhungatheka noma ukwesaba kusukela ebuncaneni kakhulu. Okungasifanele nakancane.
Yini eqondakala kangcono manje ngoba kuyinto enengekayo ukuyenza, ukugcoba ikhala ngezidingo zakhe nokumthethisa phezulu?
Yebo, uma uqondisisile, lisekhona ithemba ngenja yakho. Kepha, Funda futhi le ndatshana kusukela ekuqaleni.
Kodwa yini engingayenza u-Antonio?
Awekho amakhambi asekhaya
Kufanele uyihlohle ngaphakathi. Awekho amakhambi asekhaya. Abukho ubuqili obulula noma iyiphi indlela noma iqhinga elingasisiza ukuthi simise inja yethu ekuchameni nasekungcoleni ekhaya, okungokwakhe.
Futhi akufanele babe necala noma lokho kuzomane kusenze sithuthukise zonke izinhlobo zemizwa engemihle ezungeze umdlwane, sigqoke isibopho esingokomzwelo naye, esehliswa yizinhlangothi zombili ngasikhathi sinye. Futhi yilokho esingakufuni kakhulu.
Ukukhuluma ngokuthi ungayilungisa kanjani
Yebo, njengoba siyisihloko esibanzi kakhulu, nginqume ukusibamba ngezihloko ezimbalwa, lesi sokuqala lapho ngikhuluma khona ngokwehluleka okuvame kakhulu nezici ezahlukahlukene, lapho engizama khona ukucacisa izinto eziyisisekelo njengalezo inja ingane (uma ungenayo uzwile ngalokhu, asihambe kahle), ukuthi udlame lomzimba noma lwamazwi alufundisi nokuthi kungabhekanwa nenkinga yokukhulelwa ngumuntu, ukuthi siyini isimo ngokwaso.
Kungakho-ke ngikumemela esihlokweni esilandelayo engizokushiyela sona ngesonto elizayo., kuleli khasi lenja oyikhonzile, futhi lokho kuzophatha isihloko esichazayo esithi "Ungayenza kanjani inja yami iyeke ukuchama ngaphakathi endlini". Ungaphuthelwa.
Ngaphandle kokubingelela okuningi kuze kube yisonto elizayo. Nakekela izinja zakho ...
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Kungani inja yami izikhulula ekhaya?
Ekugcineni unikeze abaningi akufanele kube futhi asikho isixazululo. Ngifunde konke ukuphelelwa izimpendulo. Futhi, kungisebenzele ukumkhombisa udoti wakhe nokuchama ukumphonsela inselelo ngenkathi engenzi ephepheni. Manje sekungaphandle noma uma lina kuyayenza ephepheni.Futhi Okuthile okunengqondo kuwo wonke umuntu amathoni ezwi: amnandi uma enza okuthile okuhle futhi ahlotshaniswa nokutotosa nokuqina uma ufuna ukuwulalela.Nezikhathi lapho ngishaye khona screech kwangizwisa ubuhlungu ukwedlula i-coker yami kepha wawuqonda umqondo.Futhi kuyisilwane sesibili engisikhulise kanjena futhi kwavela kahle, esinye kwakuyi-mini Maltese.
U-Antonio Carretero kusho
Okokuqala ngiyabonga ngokuphawula.
Ngikuphendula ngezingxenye. Uma ufunda le ndatshana futhi, ekugcineni ngikhombisa ukuthi evikini kuzoba nenye indatshana enesihloko esithi "Ungayenza kanjani inja yami iyeke ukuchama ngaphakathi endlini", lapho ngichaza khona izindlela nezixazululo eziwusizo nezingezona ezokulwa indlela yokufundisa umdlwane nenja esikhulile ukuthi ingazikhululi ekhaya. Isihloko esibanzi kakhulu futhi ngincamele ukunikela izingxenye ezimbili kuso. Le ngxenye yokuqala igxile kakhulu ekufundiseni ngokomzimba (umzimba we-biochemistry), izizathu zengqondo nezindlela zokucabanga ezinomthelela kulesi sihloko.
Lapho-ke maqondana nokuthi ulaka nesilwane luzokusebenzela kanjani, kuyisihloko engingavumelani naso nhlobo, futhi njengami, iningi labafundisi be-canine nama-ethologists. Njengoba ungeke ushaye ingane yomuntu, ukushaya inja yengane, ngaphandle kokwenza umqondo ongokoqobo, ukungazi ukuthi wenzani. Udlame ngumthombo wokuqala walabo abangazi ukuthi benzani uma kuziwa ekufundiseni.
Futhi angisho lokhu ngoba ngifuna, kepha kunalokho kuyinto efundwa ngesikhathi kulungiselelwa i-ETHOLOGY.
Kodwa-ke, ukuqeqeshwa kwamaphepha nokulungiswa kwezwi kubonakala kukusebenzele. Vele, njengoba ukuhlanganisile nokujeziswa ngokomzimba nokulwa, awukwazi ukuqonda kahle kakhulu okusebenzele nokungasebenzanga.
Ekugcineni, uma ushaya inja, inja ayiqondi lutho ngaphandle kokuthi inomuntu eduze kwakhe oyiphatha kabi ngaphansi kwezimo ezithile. Akuyona indlela yokufundisa leyo.
Udlame kwezemfundo, kungaba kubantu, emahhashini noma ezinjeni, luyinto engenamsebenzi ngokuphelele, ngoba njengezidalwa zomphakathi ezinemizwa nemizwa esiyiyo, sithambekele ekuwenqabeni umyalezo womuntu osenza sizizwe sibi, futhi awukwazi ukuwuthola. kuhle inja yakho uma uyishaya.
Izikhathi eziningi ngihlangana namakhasimende (ngiwuthisha we-canine, umqeqeshi womuntu siqu, nesazi sokudla okunempilo ngeminyaka nesipiliyoni, lapho ngisebenze khona nezinja eziningi, ungangena kuwebhusayithi yami noma esiteshini sami se-YouTube uma ufisa ukubona umsebenzi wami). izinja azinaki noma zihlasela.
Futhi lokho kungenxa yokuthi sebeshayiwe futhi bahlukunyezwa njengemidlwane.
Ngesinye isikhathi ikhasimende langibuza ukuthi kungani inja yakhe ingazange imvikele empini. Ngambuza ukuthi wamshaya yini wathi yebo, ukuthi wamshaya ukuze azisize futhi amfundise. Futhi ngamphendula, ukuthi ngangimfundise kakhulu futhi inja ibona kuphela ingozi emvelweni, wesaba ubuqotho bakhe wabaleka. Yilokho okutholakala ngodlame kwezemfundo.
Futhi bekungaba kubi kakhulu.
Ukufundisa kuyinto enzima kakhulu ukuyenza ngaphandle kwesisekelo esinengqondo futhi ungazi ukuthi wenzeni, futhi ungahlala ufunda ukwenza izinto kangcono, futhi ngaphezu kwakho konke ukuhlonipha imizwa nemizwa yabangane bethu abakhulu.
Uma unemibuzo ngizokuphendula ngenjabulo, noma kunjalo ungabashayi ukuze bafundise.
Phendula u-Antonio Carretero
Irma Galvez kusho
Ngiyabonga, okokuqala, ngokusenza siqonde ukuthi asifani. Ngiyabonga futhi ngokungenza ngiqonde ukuthi yingane engiyifundisayo. Ngiyethemba ukuthi ngingasithola isihloko senu esilandelayo.
Phendula u-Irma Galvez
Sawubona, nginePPP yezinyanga eziyi-7 futhi ngihlala ezweni. Ufika futhi ahambe lapho ethanda kodwa okungcono uthanda ukuba ngaphakathi. Njalo ebusuku ngaphambi kokuba ngilale ngiyamkhipha isikhashana ukubona ukuthi uyazikhulula futhi ngihamba naye ngoba uma kungenjalo uhlala emnyango alinde. Noma kunjalo angikwazi ukukwenza ngoba njalo ebusuku uyazichamela futhi achamele egumbini lokudlela nasekhishini. Sengishintshe isikhathi sokudla ngaphambi kokuthi ngimnikeze ebusuku manje nasekuseni. Siphelelwe yithemba ngoba siya ngokuya siba sibi. Nginezinye izinja ezimbili ezilala ezibayeni zazo ngaphandle nenye encane elala nenye yamadodakazi ami. Ngidinga usizo ngicela
Sawubona, inja yami inonyaka ubudala, futhi iyapophoza ebusuku ngiyihamba izikhathi ezine ngosuku futhi ayikho indlela ezopopola ngayo ngaphandle, nginenye inja eneminyaka eyishumi futhi iyahamba njalo, uyachama abuye azibhebhe ngaphandle, unyaka lowo uyachama kodwa akaconsi angisazi ngenzenjani
Inja yami inezinyanga eziyisikhombisa izelwe, yafunda ukukwenza ngaphandle nakuthephu yakhe yokuqeqesha, ngichitha isikhathi esiningi nayo ngoba ngisebenza ekhaya futhi ngihlala ngedwa, ngiyikhipha ibanga elide lapho igijima khona, udla kahle, unakho konke futhi uyajabula, ngiyadlala ngaye, kodwa muva nje ungena endlini azithele, angaba ngaphandle angafuni nokwenza futhi uma ngingena futhi nginaye uyachama endlini futhi uyachama, ukuthembeka kungenza ngifune ukumnika, ngoba unakho konke futhi angiqondi ukuthi yini engingamenzela okuningi. Ukube wayevele esefundile ukwenza ngaphandle, manje kwenzekani kuye? Akukho angakutholi ngokwanele, ubonakala egula ngokomqondo. Ingabe ikhona indlela yokulungisa?
Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwezinja, yebo noma cha?
Ungayikhetha kanjani ikhola enhle kakhulu yenja yami